नेपालमा पैस कसरी कमाउन सकिन्छ ? - Jaanqari.com
नेपालमा पैस कसरी कमाउन सकिन्छ ?
asked 14 Jun '20, 21:12
पहिलो कुरा चै, मुनि लेखेको सबै बिचार मात्र हो। कृपया आफैले नि सोच्नु होल।
मेरो बिचार मा, नेपालमा जागिर मात्र गरेर पैसा चै कमाउन सकिन्न।
किनभने, नेपालमा थुला उध्योग (business) हरु जस्ले चै धेरै तलब दिन सक्छ, अरु देश को तुलना मा एकदमै थोरै छ्। धेरै जस्तो उध्योग सानो छ र आफै तिक्न गारो परिरहेको हुन्छ ।
तर यो एउटा खुसी को कुरा जस्तो लाग्छ । किनभने अहिले हामी हरु ले बिना प्रतिस्पर्धा वातावरणमा उध्योग सुरु गर्ने मौका पाइरहेका छौ । र अर्को कुरा चै, मेरो बिचार मा सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने भनेको नै ब्यापार ले लाग्छ । ब्यापार छ भने नै खेलाडी, संगीतकार, अकाउन्टेन्ट, सबै ले मेहेनत गुना को तलब पाउने छ।
तर नराम्रो पक्ष चै, ब्यपार जागीर जस्तो सजिलो हुन्न । जागिर मा दिनको आठ घन्टा काम गर्नु हुन्छ भने । ब्यपार गर्दा दिन को चौध घन्टा काम गर्न तयार हुनु । तै पनि बिना अरु को दबाब मा। जागीर मा एउटा मात्र जिम्मेवारि हुन्छ भने, ब्यापार मा सबै कुरा को जिम्मेवारी लिनु पर्छ । समय, खर्च, आम्दानी, कर्मचारी, जोखिम, ग्राहक, अरु सबै कुरा को जिम्मेवारी लिनु पर्छ । तर जति कोसिस गरिदै गरिन्छ तेति जान्कारी पाइन्दै जान्छ र ब्यापार को प्रणाली पनि बन्दै जान्छ र सजिलो हुदै जान्छ । सुरुवाद चै निकै नै गारो हुन्छ ।
तपाईं सङ्ग पैसा छ भने, घर जग्गा किनिराख्नु धेरै जोखिम रहित लगानी मानिन्छ । अर्को पैसा कमाउने तरिका भनेको सेयर कारोबार हो, तर धेरै जोखिम पुर्न हुन्छ । किनभने सेयर को मुल्य बद्ने घत्ने आफ्नो हात मा हुदैन। जून उध्योग को सेयर हो, त्यो उध्योग को चालक मा धेरै फरक पर्छ । चालक ले राम्रो गर्‍यो भने, उध्योग राम्रो हुन्छ, र सेयर को मुल्य नि बद्दै जान्छ ।
answered 14 Jun '20, 22:15
question asked: 14 Jun '20, 21:12
last updated: 14 Jun '20, 22:15
How much money does android apps developed by Nepalese make?